Dil Caawa Ka Dhacay Magaalada Ee Xarunta Gobalka Bari Ee Puntland – Goobjoog News
Waraka caawa laga helayo magaalada Bosaso ee xarunta gobalaka Bari ee Puntland ayaa waxay sheegayaan in kooxo hubeysan ay bartamaha magaalada ay toogteen askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee booliska magaalada Bosaso.
Kooxoha oo ku hubeysnaa Basloodo ayaa askariga toogtay waqtigii afurka ka dib xili uu ku sugnaa suuqa Qaadka lagu iibiyo, ayagoo askariga ku dhuftay dhowr Xabadood waxaana halkaas ku geeriyooday askarigii. la toogtay..
Askariga la dilay oo ka tirsanaa ciidamada Booliska ayaa magaciisa lagu soo koobay Xamari, waxaana goobta iskaga baxsaday kooxihii dilka geystay.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Puntland ayaa gaaray goobta dilka uu ka dhacay,iyaga oo halkaasi ka qaaday meydka askariga,waxaana ay sameeyen howlgallo baaritaano wallow aan dad loo qaban dilkaas.
Soomaaliya Oo Barri Laga Ciidayo